Aro maka P3Dv4 autoinstaller
Aro maka P3Dv4 autoinstaller 2 afọ 4 ọnwa gara aga #950
Hey m ebudatara ụgbọ elu 2 maka P3Dv4 na ebumnuche ụfọdụ, onye nrụnye chọrọ ịbubata faịlụ ahụ n'ime (mmemme x (86) nke bụ ọnọdụ maka mmemme usoro nhazi nke 32. Lockheed wụnye na Mmemme Mmemme maka arụ ọrụ bitcoin 64. Nsonaazụ ahụbeghị ụgbọ elu achọtara mgbe ọ na-achọ ịhọrọ M lere anya folda nchekwa nke ụgbọ elu na enweghị ihe ọ bụla ebe a. Nke a abụghị nsogbu nye m dịka m ji aka ịwụnye ụgbọelu ahụ na desktọpụ m, wee detuo folda ọdụ ụgbọ elu ahụ, ụgbọ elu m. ma echere m na m ga - eme ka ị mata, daalụ
Aro maka P3Dv4 autoinstaller 2 afọ 4 ọnwa gara aga #951
Enwere m ike ịnweta aha otu n'ime ndị ahụ addons yabụ enwere m ike ịnwale ụfọdụ iji mepụtaghachi njehie ahụ ma mezie ya.
Aro maka P3Dv4 autoinstaller 2 afọ 4 ọnwa gara aga #953
Chọpụta ... 50 Falcon na Douglas C47, Daalụ
Aro maka P3Dv4 autoinstaller 2 afọ 4 ọnwa gara aga #954
Ok ekele gị,
Naanị m na-agba ọsọ ule ma chọpụtaghị ihe ọ bụla, onye na-enyocha ya abanye na nchekwa 64 maka ibe m.
Anọ m na ibe n'ibe Windows 10 64. eji P3D v4. Mana enwerem P3D v1 v2 v3, FSX na FSX Steam arụnyere na X-Plane 9 ka 11.
Ihe nrụnye enweghị ike imehie ihe n'ihi na ọ na-achọ ụzọ nke P3D v4 sitere na ndekọ Windows dị P3D v4 mepụtara igodo ya n'okporo ụzọ.
I nwere ike ilebanye anya n’ime ngwanrọ HKEY_CURRENT_USER \_ gbachiri MartinPrepar3D v4 \_ AppPath
Gwa m ihe ụzọ abụọ ahụ (jiri regedit.exe si iwu Windows iji nweta igodo ndekọ)
Aro maka P3Dv4 autoinstaller 2 afọ 4 ọnwa gara aga #955
O doro anya, Ana m eji windo 7 SP1 ... Nke ahụ nwere ike ịbụ otu okwu, m ga-eleba anya n'ime ya
Aro maka P3Dv4 autoinstaller 2 afọ 4 ọnwa gara aga #961
Ọ dị mma, ọ bụ nsogbu na windo 7 ma ọ bụ njehie ndekọ. n'agbanyeghị na nbudata ahụ na-akpaghị aka, windo 7 chọrọ ibudata Mmemme kwesịrị ntụkwasị obi ochie (x86). M ga-azụta draịva SSD iji mee windo na-adịghị anya, achọtala m nke ahụ FSX na P3D na-agba ọsọ nke ukwuu na draịvụ dị iche. Windows na-achọ n'ụzọ. Daalụ maka azịza gị n'oge! Obi Landtọ Obi .tọ
Aro maka P3Dv4 autoinstaller 2 afọ 4 ọnwa gara aga #963
Biko, ekele maka nzaghachi gị
Obi ụtọ Lnadings
Oge ike page: 0.302 sekọnd